Horyaalki 16-aad Wiilasha Kubadda Gacanta oo Muqdisho Ka Furmay +Sawirro
Sunday August 09, 2015 - 16:13:54 in Xiriirka Kubadda Gacanta by Nocsom Editor
Munaasabdadda furtinaaka horyaalkii 16-aad ee Wiilsha Kubadad Gacanta ayaa maanta ka dhacday Garoonka Wiish,waxaana ka soo qeyb galay Masuuliyiin ka socotay Wasaaradda Dhalinyarada iyo isboortiga, Madaxda Guddiga Olombikada Soomaaliyeed, Madaxda xiri
Munaasabdadda furtinaaka horyaalkii 16-aad ee Wiilsha Kubadad Gacanta ayaa maanta ka dhacday Garoonka Wiish,waxaana ka soo qeyb galay Masuuliyiin ka socotay Wasaaradda Dhalinyarada iyo isboortiga, Madaxda Guddiga Olombikada Soomaaliyeed, Madaxda xiriirada kubadda cagta, Kolayga, Laliska ,Ciyaaraha Fudud iyo Madaxda Xiriirka kubadda Gacanta.
Ugu Horeyn waxaa halkas ka hadlay Xogahayaha Xiriirka kubadda Gacanta Nuur Maye Cusmaan waxuuna sheegay in sandkan uu horyaalka ka duwan yahay sanadahii lasoo dhaafay kooxahana ay diyaar garow wanaagsan usoo galeen iyagoo ciyaartoy da’yar ay sandkan horyaalka ka qayb qaadanayaan taasoo muujinaysa rajada xiriirka ee ah in ciyaartoy tayo leh oo da’yar ah ay soo baxaan.
Guddoomiyahya Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Gacanta oo isna goobta ka hdlay ayaa sheegay in Xiriirka doonayo in kooxaha soo bandhigaan ciyaaro wanaagsan oo aqlaaq wanaag kujirto xiriirka uu abaal marin doono ciyaarki iyo macalinki ku sifoobo wanaag, dhanka kalena ay ganaax dul dhigi doonaan ciyaartoydi iyo macaliki aan la imaan ciyaar wanaag iyo maamul wanaag.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhaklinyarada iyo isboortiga Daahir Cabdullahi Cilmi oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddda ay aad ugu faraxsan tahay in ay kasoo qayb gasho furitaanka horyaalka kubadda Gacanta Wiilasha ayna la dhacsan tahay dadaalka uu kujiro Xiriirka kubadda Gacanta oo dalka iyo dibadaba dhaqdhaqaayo kawada, waxuuna ugu dambayn furay horyaalka.
Horyaalka oo ay sanadkan ka qayb galkayaan 7 koox waxaa kulanki ugu horeeyay lagu daahfuray kooxaha Horseed iyo Nationlink waxayna waqti loogu talo galay ku idlaatay 18-7 oo ay guusha ku raacday kooxda Horseed.
Horyaalka ayaa la ciyaari doonaa maalmaha isniinta , Talaada iyo Khamiista waxaan kulanka labad ee horyaalka dheeli doona kooxda Horyaalka Heegan iyo Dekeddaha.